ध्रुव बिकको घर बाजुरामा पुग्दा देखियो यस्तो बेहाल [हेर्नुहोस् भिडियो] - pnpkhabar.com
You are at:Home»अन्तर्वार्ता»ध्रुव बिकको घर बाजुरामा पुग्दा देखियो यस्तो बेहाल [हेर्नुहोस् भिडियो]
ध्रुव बिकको घर बाजुरामा पुग्दा देखियो यस्तो बेहाल [हेर्नुहोस् भिडियो]
By पूजा बानियाँ on ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०४:५० अन्तर्वार्ता, भिडियो
पिएनपिखबर, भक्तपुर। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ प्रतिभाको खानी नै छ। प्रतिभावानहरु यहाँ अवसर नपाएर हराइरहेका छन्। अवसरको अभावमा साथै आर्थिक अवस्था नाजुक भएकै कारण आफ्नो प्रतिभा देखाउन नपाएकाको पनि थुप्रै छन् यहाँ। कला, गला भएका तर अवसरको अभावमा ओझेलमा परेका प्रतिभाशाली व्यक्ति मध्य एक हुन् ध्रुब बिक।
काठमाडौँबाट १२०० किलोमिटर नेपालको सुदुर पश्चिममा पर्ने अति बिकट ठाउँ बाजुरा जिल्लाका स्थानीय ध्रुब बिक केहि समय अगाडी सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भएका थिए। सानै उमेरमा उनको गायनले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउन सफल भयो।
गौमुल गाउपालिक वडा न. ६ मा ध्रुब बिकको सानै भए पनि चिटिक्क परेको घर थियो। प्राकृतिक प्रकोपलाई अहिले सम्म कसले नै रोक्न सकेको छ र। एक्कासी ठुलो पानी परेर आएको बढीले बगायो ध्रुब बिकको सानो घर। बढीले घर बगाए पछि उनको स-परिवार सदरमुकाम मार्तडी बजारमा जस्ताको घर टिनले छाएर बसेका छन्।
सानो टिनले छाएको घर भित्र तन्नाले बारिएको छ। एकातिर दाइभाउजुको कोठा अनि अर्को तिर आमा र ध्रुबको। सोहि कोठामा भान्छा छ, सरसामानहरु राखिएका छन्। सानो घर भित्र अव्यवस्थित माहोल एकदम दयनीय छ।
दुई छाक खान लगाउन धौ धौ पर्ने ध्रुबको परिवारमा उनको बुबा बाहेक सबै बेरोजगार छन्। हुन त उनको दुई जना दिदिहरुको विवाह भैसकेको छ। दुइवटा दाई एक भाउजु र आमा घरायसी काममा व्यस्त हुन्छन्। ध्रुब बिकका बुबा इन्डियामा कहिले होटलको भाडा माझ्ने कहिले गाडि सफा गर्ने त कहिले चौकीदारी गर्ने काम गरेर अलिअलि खर्च घरमा पठाउने गर्दछन्। एक जनाको कमाइले घर खर्च टार्न नै मुस्किल हुन्छ।
‘हामीलाई बरु इन्डिया पानी पधेरो जस्तो नजिक छ , काठमाडौँ कस्तो हुन्छ हामीले त देखेका पनि छैनौ। हाम्रा परिवारबाट एक जना भान्जा काठमाडौँ सम्म पुगेको थाह छ त्यति हो।’ गह भरि आशु पार्दै ध्रुब बिककि आमाले गुनासो गरिन्।
छोराले गाउन त गाउछ तर हामीले चाहेर पनि उसलाई गायक बनाउन सक्दैनौ। हाम्रो आर्थिक अवस्थाले नै भ्याउदैन सर दुख लाग्छ भन्दै रोइन् ध्रुब बिककि आमा।
१६ वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिएकी ध्रुब भाईको जेठी दिदि गीता बिक भन्छिन् ,’मलाई भाइले गाएको सुन्नै मन लाग्दैन। साह्रै मन रोएर आउछ। भाई एकदम मिठो गाउछ। भाइले गाए पछि मेरो मन नै थामिदैन एक्कासी भक्कानिएर आउछ।’
लाल बहादुर बिक नाम गरेका ध्रुबका जेठो भिनाजु ससुरालीको अवस्था देखेर निकै भाबुक हुँदै भने ,’बुबा दिल्लीमा काम गर्न जानु हुन्छ। कहिले गाडी पुछ्ने कहिले भाडा माझ्ने कहिले चौकीदारी गर्ने गरेर अलिअलि कमाएको पैसा घर खर्च गर्न पठाउनुहुन्छ। यस्तोमा भाइलाई हामीले कसरी गायक बनाउनु। ‘
छेडादेवी गाउपालिका वडा न. ९ बस्ने गोबिन्द नेपाली ध्रुब भाइको दाइका साथी हुन्। पढाईकै शिलशिलामा उनी मार्तडी आएका हुन्। मावलीको नाता पर्ने भएर पनि गोबिन्दले ध्रुबको घरपरिवारको अवस्था नजिकबाट बुझेका छन्। उनले भने, ‘ध्रुब भाइ एकदम मिठो गाउछन् तर मामाको कमाईले घर धान्न नै मुस्किल छ कसरि बनाउने भाइलाई गायक। ‘
ध्रुब बिक भविष्यमा गायक बन्न चाहन्छन्। तर उनको घरको नाजुक अवस्थाका कारण उनको सपना अपुरा होला भनेर पिएनपिखबरको टिमले उनलाई काठमाडौँ ल्याएको छ। उनको गायक बन्ने सपना अब सकार हुने कुरामा उनका परिवार विश्वस्त छन्।